Kwasukasukela embusweni kaNkulunkulu, u-Adamu no-Eva. Sasihlala - ningadabuki, akhazinyuliswe Uthando LukaNkulunkulu. Yebo, sondela them izinyoka nezilingo, futhi sikhohlwe ukuthi sonke kudingeka sicele isibusiso sikaNkulunkulu. Futhi ngamabomu Wanqotshwa yisilingo, ngokunambitha isithelo esenqatshelwe. Ukungalaleli izingane bahluphekile kaNkulunkulu uBaba. Kepha, umusa kubo, wabanika ithuba lokulungisa, nihlale ezweni. Nkosi enethemba lokuthi umoya uyosibonisa bonke izicupho okubi futhi physicality, nokuthi kuyoba abantwana baKhe ukuba njengoyise, hhayi ngaphandle kuphela kodwa futhi ngaphakathi: iyoba ngcwele, Abathobekile nabamnene. Ngakho kwaba khona emhlabeni lwesintu.
Iminyaka yadlula, futhi abantu akagcinanga ezenzweni zayo nemicabango ngokuziphatha nobumsulwa, okuyinto ephula imiyalo cosmic, okuholela a nokucekelwa ukwazi, ngeshwa, izifo, izimpi, zinhlekelele kwezomnotho ukuhlanganiswa kwemibuso futhi zinyamalala (isib, Lemuria, le Atlantean). Ukuqondisa abantu indlela efanele yentuthuko, banikezwa iMiyalo Eyishumi - the Cosmic Imithetho uMuntu. Bafika Umhlaba incarnation Waphezulu ukulungisa isibonelo sakhe sokuphila zokuziphatha ukuphila kwabantu.
Nokho, okubi akuyona ithule: ukuphupha yokuchitheka kwabantu nendawo yonke, kulokhu-ke uye wafuna ukuvimbela abantu ekubeni abangcwele angene eMbusweni kaNkulunkulu uBaba futhi, nokuthi umhlaba lombuso. Futhi okubi wathumela amanxusa abo phambili ekukhulumeni kwabezindaba, i-Inthanethi, ifike ezindaweni zomphakathi ezibalulekile. Ukudala horror movie, ukukhuthaza ubudlova, besekela ukuphila ngaphandle komshado, umshado gay, okubonisa lezi amafilimu idili zokudakwa, ukubhema, ukudla izidakamizwa okungukuthi, ukushintsha owakwakhe, njengoba umthetho we "injabulo", okubi ngokufundisa intsha sisendleleni lokubhubhisa nokufa komphefumulo. Futhi umculo wayeka ukuhlanza umphefumulo umsindo waphezulu: rock kanzima (nabadlali eziholayo abalaleli ukuzibulala), ama-pop (ukuqondisa imiqondo bakudala "amagugu") ezigcwele emoyeni. Ngokusebenzisa bezincwadi nemisebenzi yobuciko kwaholela inkulumo okubi yamanani zamanga. Futhi abantu ukhohlwe ukuthi ukuqongelela badlale imali kubonakala isiphetho izingane zabo. Futhi ungakhohlwa ababusi ukuthi umndeni wakubo - lonke lwesintu, ukuthi uNkulunkulu uYise ufuna ukuchuma kubo bonke izingane zabo.
Wabona ukuthi ububi uyayibamba imiphefumulo nezingqondo zezingane yaKhe, uNkulunkulu wakhetha ukunika abantu, kokubili abampofu kanye nabacebile ngokuthi "okubi", futhi ukuba nesikhathi esimnandi zokugcina ukuba babe osanta. Ukuze kuphela amadoda ezingcwele ubumsulwa imiphefumulo yabo, imicabango nemithandazo Usengayilondoloza umhlaba ekubhujisweni - ekupheleni kwezwe.
UJehova wathuma Emhlabeni uMoya oNgcwele ngesimo umama kamama, uMama Umhlaba, incarnation Omkhulu kakhulu, ukuba wonke amabutho loMdali - Shri Mataji Nirmal Srivastava. Futhi yena wazalwa ngo India njengomuntu, njengoMuntu Kwaphezulu. Yabuka esintwini, ngizibuza ukujula okwehlele imikhuba yakhe, kodwa ukwazi ukuthi abantu babe nenkululeko yokuzikhethela, ngangifuna abuyele ezulwini futhi unike kuBaba-Nkulunkulu ukunquma isiphetho abantu Nomhlaba. Nokho, njengoba azi amandla ulaka lukaNkulunkulu ukuthi ozokugiriza ekudalweni bakhe abayizihlubuki, nokubona ukuthi abafundisi bamanga ahole abantu esihogweni e ngozwela olukhulu likanina abantu njengoba abantwana baKhe, wavula lwesikhombisa amandla isikhungo - Chakra Sahasrara. Khanyisa LukaNkulunkulu batheleka yonke - uvukile kundalini (amandla kaMoya oNgcwele) kaNkulunkulu.
Kusukela manje kuqhubeke (kusukela ngo-May 5, 1970) Shri Mataji waqala umsebenzi ekuguquleni esintwini. Wachazela kubantu yilowo nalowo unekhono ukukhiqiza at intando SRF - emunye noNkulunkulu - ngokusebenzisa ukuvelela amandla linamathele akhe Lord the Kundalini kanye nokuhlanzwa okwalandela lomzimba wakhe ecashile (nezikhungo energy - Chakras - neziteshi ezintathu).
"Ngikwenze ube njengonkulunkulu izingelosi, - uthe Shri Mataji - baba osanta ngokwabo."
Waphelelwa ngamandla uhlelo lukagesi emhlabeni zokuhlanganisa Kundalini - Sahaja Yoga - nezindlela zokuhlanzwa yomzimba ezicashile ukuba babe ngcwele futhi ihlaba umkhosi ukukhanya nothando saphezulu.
Bona. Angeziwe iwebhusayithi www.sahajayoga.ru
Shri Mataji wamangala kakhulu, kungani abantu bengafuni ukwamukela isipho sikaNkulunkulu - Sahaja Yoga - nibe ngcwele, ukuphila ngaphandle izinkinga isifo uzophule, umndeni, izwe, umhlaba kanye nayo yonke indalo nasolakeni kaNkulunkulu uBaba. Futhi, zokufuna ukulondoloza okuningi abantwana baKhe, esitshela Shri Mataji: "Thola lakho Self-Ukuqaphela." Ukuze wenze lokhu ngokusuka enhliziyweni ukuba abuze: "Nkosi, ngiphe lawo, sicela, ukuzalwa ngoMoya oNgcwele, elithenjiswe eBhayibhelini."
Vumela umoya wethu uyosibonisa!
Ukuhambelana Dev-Aquarius abesifazane futhi amadoda: yinto ehlukile, ukuphila ezahlukene
Indlela yokupheka izinkukhu ezinkukhu ku-"Multi Polar"
Imigqa: kuyini futhi kubizwa ukwenza?
Cashews: izakhiwo ewusizo
Sergey Kiselev: Biography nemisebenzi